Curriculum – Full-Time Training in Yangon
အချိန်ပြည့်သင်တန်းကျောင်းရှိ အဓိကအချိန်သည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ပါဝင်သော၊ Watchman Nee and Witness Lee တို့၏အမှုတော်များအားဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသသော သမ္မာတရားကို လက်ခံခြင်း၊ လေ့လာခြင်းနှင့် အမှုဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤညီအစ်ကိုများသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ စင်ကြယ်သော နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း သွန်သင်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်နှင့် စီမံကိန်းကို အပြည့်အ၀ ဖွင့်ပြပေးရန် ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက် ပြန်လည်ရယူခဲ့သော သမ္မာတရားများအပေါ် တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တန်းကျောင်းသည် ဤအရာများကို ပြောဆိုရန်၊ ဤအရာများကို သွန်သင်ရန်နှင့် ဤအရာများကို အမှုဆောင်ရန် အထူးအခွင့်အရေးရှိသည်။ သို့မှသာ ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာတော်သည် တည်ဆောက်ခံရကာ သခင်ဘုရား၏ကျေနပ်ခြင်းနှင့် အလိုတော်အတွက် သတို့သမီးကို ပြင်ဆင်ခြင်းရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
The Gospel and the God-ordained Way
Lessons on Children, Young People,
The Body of Christ (two-year class)
The Experience of Christ as Life (two-year class)
The Full Ministry of Christ (two-year class)
God’s Economy (two-year class)
The Gospel and the God-ordained Way (two-year class)
The Spirit (two-year class)
Video Class (two-year class)
This class gives trainees an opportunity to view video footage of Brother Witness Lee. Course material rotates by term. Past courses have included messages from The Seven Feast messages.
and College Students (first-year class)
The Triune God and His Word (first-year class)
A Life of Service (second-year class)
The New Jerusalem (second-year class)
“Our character is our very person. A person’s usefulness, the things which can be entrusted to him, the responsibilities he can bear, and the things he is able to accomplish altogether depend on his character” (Character, p. 17). This elective focuses on the crucial practices revealed in the Word that cultivate and maintain the divine life we received at our regeneration.
This biweekly course provides trainees withabasic theory in Music.